संक्रमित शिक्षक ‘गम्भीर’ – Dainik Lumbini
संक्रमित शिक्षक ‘गम्भीर’
प्रदेश ५ कोरोनाको ‘हटस्पट’
न कुनै देशबाट फर्किएका, न संक्रमित शहरमै पुगेका । गाउँमै शिक्षण पेशामा रहेका गुल्मीका शिक्षकमा कोरोना देखिनुले संकटको संकेत गरेको छ । उनलाई कसरी कोरोना स¥यो भन्ने आशंका गर्ने आधारहरू समेत भेटिएका छैनन् ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर ६ पुर्काेटका शिक्षकमा सोमबार कोरोना पुष्टी भएको हो । उनको भैहरवास्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । उनी जेठ एक गते जण्डिस र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि बुटवल आएका थिए । त्यसअघि उनी अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित छायाँ पोलिक्लिनिकमा उपचार गराउन पुगेका थिए । त्यहाँ सम्भव नभएपछि उनी मणिग्रामको क्रिमसन अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार उनलाई आइसीयुमा राखिएको छ । अवस्था गम्भीर छ । उनको थ्रोड स्वाब तीन दिनअघि निकालिएको प्रयोगशालाका डा. राजेन्द्र गिरी बताउँछन् । ढिलोगरी परीक्षणको पालो आएपछि सोमबार मात्रै कोरोना पुष्टि भयो ।
शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि क्रिमसन अस्पताल शील गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पोलिक्लिनिक समेत शील गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । गुल्मीको गाउँमै बस्नेमा कोरोना कसरी देखियो भन्ने आश्चर्य छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसी भन्छन्–‘उहाँलाई कि अस्पतालमा कोरोना स¥यो, कि एम्बुलेन्समा सरेको हुनुपर्छ ।’ मदानेमै भारतबाट फर्किएका नागरिकबाट पनि सरेको हुनसक्ने आशंका समेत छ । त्यस विषयमा खोजी भइरहेको छ ।
शिक्षकको संक्रमणसंगै प्रदेश ५ मा संक्रमितको संख्या एक सय ५९ पुगेको छ । मुलुककै करिव आधा संक्रमण प्रदेश ५ मा देखिएको छ । एकै दिन ४९ जना संक्रमित थपिएका हुन् । शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारमा समेत संक्रमण देखिएपछि नेपालमा महामारीको विशाल दृश्य देखिन थालेको छ ।
बाँके प्रदेशको केन्द्र बनेको छ । कपिलवस्तु र रूपन्देही दोस्रो केन्द्र हुन् । भारतीय नागरिकको बाक्लो आवगमन, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र उपचारको कमजोर अवस्थाले नागरिकमा त्रास छ । प्रदेश र संघ सरकार यसमा बेखबर जस्ता देखिन्छन् ।
सोमबार गुल्मी, दाङ र बाँकेमा मात्रै थप ४९ जना नयाँ संक्रमित थएिका हुन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ वटा तराईका जिल्लाहरूमा यसअघि नै कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको थियो ।
सोमबार गुल्मीका एक व्यक्ति थपिएपछि प्रदेशका पहाडी जिल्ला पनि कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहेनन् । गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाका ४० वर्षीय पुरूषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी जेठ १ गते रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको क्रिमसन अस्पतालमा उचारको लागि आएका थिए । उनको स्वाब तीन दिन अघि भैरहवास्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो । कोरोना पुष्टि भएसँगै सोमबारै सो अस्पताल शील गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोद गिरीले बताए । गुल्मीमा बस्ने ति पुरूषलाई कसरी कोरोनासंक्रमण भयो भन्ने थप अनुसन्धान भईरहेको निर्देशक गिरीले बताए ।
प्रदेश ५ मा पहिलोपटक बैशाख १९ गते रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका २५ वर्षीय र बाँकेको नेपालगञ्जका ६० वर्षीय पुरूषमा एकसाथ संक्रमण देखिएको थियो ।
सोमबार बाँके जिल्लामा मात्रै ४७ जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकेमा यसअघि नै ३४ जना संक्रमित देखिएका थिए । नयाँ संख्यासँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या ८१ पुगेको हो ।
बाँकेको नरैनापुरको वडा नं. २ को आदर्श मावि, लक्ष्मणपुरबाट ८७, वडा नं. ५ को दीपेन्द्र मावि, भोज भगवानपुरबाट ३९ (एक जना मृत्यु), वडा नं. ५ कै नेरा प्रावि, हुलासपुरबाट ७२ र वडा नं. ६ को जयकिसन मावि भगवानपुरबाट ६५ जनाको स्वाब लिइएकोमा ४७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यी बाहेक ११ जनाको आइतबार स्वाब लिइएको छ । आठ जना संक्रमितमध्येमा दुई जना घरपरिवार ससुराली गएको पाइएपछि आफन्तको स्वाब लिइएको बताइएको छ । अन्य विवरण बुभ्mदै गरेको र कन्ट्रयाक ट्रेसिङको काम भइरहकोे प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोद गिरीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा भारतसँग सीमा जोडिएका ६ जिल्लामध्ये ६ वटै जिल्लामा संक्रमण पुगेको छ । पहाडी जिल्ला गुल्मीमा पनि भेटिएपछि प्रदेशमा त्रास बढेको छ । यो प्रदेशका ५ पहाडी जिल्लामा कोरोना पुगिसकेको छैन ।
बाँकी रहेनन् कोही
प्रदेश ५ मा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितमध्ये रूपन्देहीका पहिलो संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । यो प्रदेशमा सबैभन्दा धरै संक्रमित भेटिएको जिल्ला बाँके हो । यो जिल्लामा अझै संक्रमित संख्या अझै बढ्न सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन् ।
भारततर्फको सीमाबाट लुकीछिपी आउने क्रम नरोकिँदा संक्रमण समुदायमा फैलिएर अवस्था नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयका अनुसार बाँकेमा ८१, कपिलवस्तुमा ४३, रूपन्देहीमा २७, नवलपरासी पश्चिममा एक, बर्दियामा दुई, दाङमा चार र गुल्मीमा एक जनामा पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १ जना निको भएर घर गएका छन् भने एक जनाको क्वारेटाइमा मृत्यु भएको छ ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन
लुम्बिनी अस्पतालमा शुरु हुदै ओपिडी
सुपौली गाउँमा सामूहिक धानखेती